Kumhanyisa Pombi yako neAtomatiki Kutungamira Generation | Martech Zone
Kuwedzeredza Pipeline yako neAtomated Lead Generation
Chipiri, February 16, 2016 Douglas Karr
Makambani mashoma ane simba rekutengesa rekudaidzira pane ese tarisiro iripo. Izvi zvinoreva kuti inowanzo kusiiwa kune mukana kana ura hwekunzwa pane tarisiro dzaunofanira kushandisa nguva yakawanda uine. Kazhinji kazhinji kwete, izvi zvinoreva njodzi kumakambani. Ivo vanopedza nguva pane tarisiro isingazombo shandure ivo vangave vaine zvinotungamira izvo zvinopisa uye zvakagadzirira kuita bhizinesi.
Zvoga kutungamira chizvarwa mapuratifomu anopa nzira dzakasiyana apo zvinotungamira zvinobva zvafambiswa uye zvinowanzoiswa zvibodzwa pahunhu hwavo hwekuvhara. Iine database yakachena uye yakakodzera firmagraphics, inotungamira dhatabhesi inogona kushandurwa kuita maitiro anobatsira wako wekushambadzira uye wekutengesa timu kuziva marongero ari kushanda - kubva pamushandirapamwe pfungwa kusvika mukugadzirisa.
Gadzira yakaburitsa iyi infographic kuratidza nzira mbiri dziripo dzevatengesi kana zvasvika pane yavo tarisiro uye vatengi nzira dzekugadzira:
Zvakajairika Migwagwa zviripo mune echinyorwa kutungamira chizvarwa maitiro. Zvinokonzeresa kushomeka kwakawanda uye kusakwanisa kuyera kudzoka mukushambadzira mari. 50% kusvika 65% yekutengesa inorasika kana mukwikwidzi achipindura usati waita kutungamira
Inobudirira Kutungamira Chizvarwa inomhanyisa pombi yekutengesa ichishandisa nzira yekuzvitungamira yekutungamira nzira inogona kuiswa mukati mematanho ese ekutengesa: kuronga, kuvhura, kuuraya, kuongorora uye kugadzirisa - kuwedzera kudzoka pane kudyara nekugadzira vatengi vanofara. Makambani anoita otomatiki manejimendi manejimendi anoona iyo 10% kuwedzera kwemari mumwedzi 6-9
Tags: automated lead chizvarwainfographicsa kanganisikalead kushandisa michinazvinoisaKugonesa Kugonesa
Douglas Karr Tuesday, February 16, 2016
Scout: Sevhisi yekutumira Maposadhi emadhora 1 Imwe neimwe
Kenshoo Kubhadhara Dhijitari Kushambadzira Snapshot: Q4 2015
Bhalisa kune Martech Zone Newsletter
Chikero chetsamba yemumhepo